Ubuntu 21.10 Impish Indri. Kukura kunofinha (Opinion) | Linux Vakapindwa muropa
Diego ChiGerman Gonzalez | 22/10/2021 21:09 | Yakagadziridzwa ku 23/10/2021 21:36 | General
Vhiki rapera, Akasunungurwa Ubuntu 21.10 Impish Indri, yechipiri yeaviri epagore kuburitswa kwatakajaira. Mubvunzo wangu pakuyedza waive wei?. Ini handina kumbobvira ndanyanya kufarira gakava riri pakati peavo vanodzivirira kuchengetedza hurongwa hwazvino hwekuburitswa kaviri pagore, uye avo vanoratidza kutamira kune inoenderera yekuvandudza chirongwa (Rolling Release) ini ndinoisa zvirongwa zvakawanda kubva kune akawanda akasiyana masosi zvekuti mwedzi miviri yega yega. kana zvakadaro ndinofanira kuita kumisikidza kubva pakutanga. Nekudaro, ini ndiri kuzendamira zvakanyanya kune chinzvimbo chechipiri.
Mushure mekutengesa kambani yake yekuchengetedza makomputa nemari zhinji uye asati atanga Canonical, Mark Shuttlewort akapedza zororo kuInternational Space Station.Aive wechipiri murwi kuita izvi. Iwo mweya wekudaidzira ndiwo waitungamira makore ekutanga ekuparadzira. Ubuntu yaive yakanyanya kudarika nyore kuisa Debian. Akaedza zvinhu zvitsva, zvaigona kufamba zvakanaka kana zvakaipa, asi zvaive zvakakodzera kutaura nezvazvo.
Ubuntu 21.10 Impish Indri. Hapana chitsva kuratidza
Hapana munhu anogona kuramba kuti Canonical yakaedza kuyedza kurarama kubva pamushandisi wemba. Akaedza kugadzira mudziyo wakachinjika kuburikidza nekuwanda mari, akatanga chitoro cheapp icho vagadziri vanogona kuwana mari kubva. Asi, havasi vese vaive nechokwadi chekuti vaida mushandisi wepamba. Kubva pa peji repamutemo vakakoka vashandisi kuti vabvunze mibvunzo yavo paAubUbuntu, vataure bugs paLaunchpad uye vape mazano pane yekutumira tsamba kune vanogadzira uye vashandisi kuchinjanisa, mamoderita eaya masaiti akadonhedza mibvunzo uye akavhara mishumo yezvikanganiso pasi pechikonzero chepamutemo uye , vakapindura nenzira yakaipa kune avo vakashinga kutaura chimwe chinhu chingadenhe maonero epasirese ehukuru hwavo vagadziri venharaunda.
Paakafunga kuvhura Kubatana uye kupinda mumusika wakashandurwa wedhijitari, Canonical yakatanga nharaunda inosimudzira yekuvandudza. Izvo hazvina kumbobvira zvashanda mushe, zvinyorwa zvacho zvaive zvisina kukwana uye, muAskUbuntu, ndiko kwaive kwakatumirwa zvinyorwa, kugadzirisa matambudziko, vakapindura kuti mibvunzo yakadaro yakanga isina kukodzera kubvunza ipapo.
Nekuda kweizvozvo, Ubuntu yakapedzisira yadonhedza nharembozha uye smart TV. Nekudaro, anenge nemukana akawana musika wekambani. Uye, akaisa kugona kwake kwese kugona ipapo.
Uye, ndiro dambudziko rakakura randinoona muUbuntu 21.10 Impish Indri. Izvo hazvipe zvachose. Nhau dzinogona kunge dziri, dzese kana GNOME kana iyo Linux kernel. Kunyangwe iyo desktop yakamira kutarisa senge Kubatana kutora kutaridzika kweimwe GNOME-based distro.
Tarisai izwi rekuti (Maonero) remusoro. Iko hakuna chaicho chakakanganisika nemaitiro acho pachawo. Kunyangwe ini ndisingakwanisi kunyatso kuenzanisa nekuti ndakachinja makomputa pakati pe21.04 ne21.10, Impish Indri yakajeka, inoisa nekukurumidza, uye inomhanya mushe. Pasina mubvunzo, zvese izvo vashandisi vanochengetedza mumusika wemakambani vanogona kutarisira kubva kune desktop desktop system. Kusanganisira iyo grey kumashure kugovera kuruzhinji yemenu yekushandisa.
Kufanana nevaya vane mapapiro ekuruboshwe avo vasina kumbopotsa kuratidzira, uye zvino vazvigumira pakutumira tweet kubva ku iPhone yavo vachipesana nekuvharirwa kweCuba vachiri ne latte ku Starbucks, Ubuntu inochengetedza chiratidzo chekupandukira. Firefox ikozvino yaiswa seSpap package. Ichokwadi ndechekuti haina kuchinja zvakanyanya, kunze kwekunge zvimwe zviri nyore kubvisa.
Isu takanga tavimbiswa kuisirwa nyowani yakavakirwa paFlutter, uye, kunyange isina kugadzirira, inogona kuedzwa mushanduro Rarama Canary. Chokwadi ndechekuti haizopa chero chinhu uye, zvingave nani kana vakatora maCalamares saKubuntu uye Ubuntu Studio.
Kana paine chinongedzo pakati peiyo Ubuntu nhau uye nemweya wehunyanzvi waMark Shuttleworth, saka hapana kupokana kuti iwe unofanirwa kunge wave kushandisa zororo rako kune nzendo dzezvitubu zvinopisa padivi pevanoenda pamudyandigere. Handisi kuti chinhu chakaipa. Kungoti ndakanga ndabhoikana neUbuntu iyo yandinoona seFedora ine Snap mapakeji.
Kutendeseka, shanduro mbiri dzegore negore hadzichapembedzi.
Neraki, Linux ine zvimwe zvakawanda sarudzo yekusarudza kubva. Nharaunda dzemunharaunda dzinoramba dzichiita zvinhu zvinotonhorera. Uye kune nguva dzose LinuxMint, Manjaro kana Deepin.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Ubuntu 21.10 Impish Indri. Kukura kunofinha (Opinion)
Iwe unosarudza sei, maonero ako, ani nani anoda chimwe chinhu chakagadzikana uye anoshanda nekombiyuta, anofunga zvachose zvakasiyana, kuiswa kwangu kweUbuntu kunotora makore anopfuura 3 uye kuisa system yacho mwedzi miviri yandinogara neWindows.
Chokwadi, ndicho chinhu chakanaka nezveLinux. Wese munhu akasununguka kuishandisa nekuidzosera kakawanda sezvavanoda, kunyangwe ini ndisinganzwisise kuti mwedzi miviri yega yega ndinofanira kudzosera OS. Chinhu chakanaka nezve linux ndechekuti iwe unogona kuichengeta ichigadziridzwa pasina kutangazve kunze kweiyo kernel. Kunyangwe ndaive nenguva yangu yeUbuntu pakutanga, ndinorangarira kuti ndakaisa akawanda maapplication uye aivepo kwegore. Minimum. Asi ini ndiri Fedorian, uye chokwadi ndechekuti neiyo default package, pamwe neiyo gnome apps, ikozvino ndinongomira pachangu kuisa madhiraivha eNvidia, iyo multimedia codecs, akati wandei ekare maapplication, uye ndizvozvo. Nekubatanidzwa kweGnome online account, ini ndinosanganisa yangu gnome account uye ndizvozvo. Zvinonditorera maminitsi mashanu kana gumi. kuve nezvose zvakagadzirirwa, uye kumirira kutsigirwa kweiyo Fedora chaiyo kupera. Uye ipapo ini ndinoisa iyo itsva vhezheni.
Handizive kana wakashandisa Windows nguva pfupi yadarika (ngatitii mumakore gumi apfuura) asi ini handina kudzoreredza Windows mumazera. Kubva paPC yandakatenga muna 10 neW Vista, handina kumbofanira kudzosera. Kuenda kuburikidza neshanduro dzakasiyana (svetuka kubva pa2007 kusvika ku7 semuenzaniso). Ini handizive, kudzivirira Linux, hazvifanirwe kurwisa zvenhema Windows, Linux ine akawanda masimba ayo. Windows ine zvipingamupinyi zvayo, asi kugadzikana haisisiri imwe yacho, kwenguva yakareba.
Ubuntu ini handiishandise nekuti ndiyo yakanakisa kana nemhando yepamusoro. Iyo ine imwe yeakanakisa tsigiro yehardware kunze kwebhokisi, uye iyo yekurongedza system ndiyo yakanyanya kusimba. Dambudziko randinaro nderekuti makore maviri ega ega ndinofanira kutama kubva kulst. Ini ndinoishandisa kubasa, uye kana ndine nguva yekupedzisira, handidi iyo pc kuti indiudza "Redmond aive nemabhora kuti aone kuti ruzivo rwako rwunoshanduka sei, enda unozvigadzirira kofi kuti kune 153 inogadziridza ine akati wandei reboots uye handei tione kana pc yako ichiri kutendeuka ».
Ndinoda huzivi hweubuntu? Kwete, ini ndinosarudza debian's, asi iye ibhadhi. Ini ndiri mugadziri akazara, uye ndinoda kushandisa chrome uye akasiyana copyrighted zvirongwa.
Bareflank, chishandiso chekusimudzira nekukurumidza kweakasarudzika hypervisors